GABDHAHA ugu qaalisan Soomaaliya ee aad loogu tartamo guurkooda? - Caasimada Online
Home Nolosha GABDHAHA ugu qaalisan Soomaaliya ee aad loogu tartamo guurkooda?
GABDHAHA ugu qaalisan Soomaaliya ee aad loogu tartamo guurkooda?
Dad badan ka ma war hayaan in ay jiraan gabdho rag badan ay baadigoobaan oo wakhti iyo lacag ba ay u huraan sidii ay ku heli lahaayeen xogtooda oo dhammaystiran, habka loo la xiriiri karo iyo hannaanka ugu fudud ee lagu hanan karo.
YAA WEEYE GABDHAHAASI?
Gabdhahaasi waa kuwa qaraabada dhaw la ah hadba madaxweynaha markaasi haya talada qaranka. Waa kuwa ay madaxweynaha walaalaha yihiin, kuwa ilma adeerrada yihiin, kuwa uu adeerrada u yahay iyo kuwa uu abtiyada u yahay.
YAA RAADIYA IYO MAXAY SE TAHAY SABABTU?
Gabdhahaasi waxaa raadiya ragga magaca iyo mansab doonka ah. Waa rag doonaya in ay ka dhigtaan jaranjaro ay ku gaaraan aqalka waddanka looga arrimiyo oo ay ku helaan xurmo iyo xaq. Waa run oo, gobannimada Soomaalida ayey ka mid ah tahay xurmaynta iyo xaqdhawrka xididka.
MA JIRTAA SHURUUD LAGU XUSHO?
Gabadhaasi hal shardi bas baa lagu xushaa, kaas oo ah in ay madaxweynaha ehelo hoose la tahay, oo ay madaxtooyada geli karto. Dhib ma lahan haddii ay qal dheer tahay, weji koobma ah leedahay, dhalo yar tahay, gooman dhaadheer iyo indhayar leedahay, coon tahay, hogfo iyo xaglo kala jeeda lee dahay. Xita waa soconaysaa haddii ay ka dhammaatay.
MA JIRTAA CID AY U SHAQEYSAY?
Haah. Waxa ay u shaqaysay saddex nin oo midi noqday safiir, midina noqday xildhibaan, kuna uu noqday agaasime ilaa iyo haddadan shaqeeya. Saddexdaas nin waxa ay kala heleen saddex gabdhood oo ehelo hoose la kala ahaa saddex madaxweyne. Waxaa igu maqaalo ah, nin isna qandaraas ku helay, mase hubo.
NIN XASAN KU HUNGOOBAY OO WAX KA RAADIYA FARMAAJO
Waxaa jiray nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ragga raadiya gabdhaha qaraabada la ah madaxweynayaasha, ayaa waxaa uu muddo dheer ka dib helay gabar ay odayga isku dhawaayeen oo madaxtooyada awood u lahayd in ay galgasho. Sannad ayey ku qaadatay in uu inta xiriir la sameeyo uu jacayl ku abuuro. Waxa uu heshiiskoodii kama dambaysta ahaa ku soo aaday xilligii doorashada, kolkaas buu waxa uu gabadhii ka dhaadhiciyey in ay dib u dhigaan guurka ilaa doorashada ka dhacayso. Nasiibdarro se, waa soo bixi waayey Xasan Sheekh. Markaas buu waxa uu bilaabay in uu dabciyo xiriirkii gabadha, halkaasina ku joogsaday guurkoodii. Waxaa iigu wardambaysay isaga oo raadiya tu` qaraabo la ah Farmaajo, in uu helay iyo in kale ma aqaane.
GABDHAHA HEERKA LABAAD EE QAALIGA AH
Sida aan war ku hayo, xarfaanta jago doonka ah meel kasta waa joogtaa. Waxaan maqlay in gabdhaha labaad ee qaaliga ah ay yihiin gabadhaha qaraabada la ah madaxda dawlad-gobaleedyada. Rag baa raadiya oo ku gala madaxtooyooyinkaasi, laakiin weli ma helin tirada ragga ku helay jagooyin sare.
FG: Adduun xog baa is dhaafisey e, xogtan haddii ay ku anfacday, asii aad tahay nin u oomman in uu madaxtooyada galo, fursad kalana waayey, tan waad ku dayi kartaa.
Haddii aad go`aansato in aad hawshaan gasho, waxa aad arkaysaa gabdho ku dhahaya maxadweynaha ayaan qaraabo nahay oo haddii la rabo ku faanayaba. Qaraabada ayaanan isku si loo aqoon, waxaa laga yaabaa in ay u jeeddo, saddex oday baan kala tirsanna amma isku jifo baan nahay, adna aad u fahanto in ay tahay tii aad doonaysay, oo halkaasi wakhti kaaga lumo. Marka waxaa lagaa rabaa in aad si fiican u barato jifada iyo ina ayaha madaxweyna oo afaran, ina ayaha hooyadiis, dadka la dhashay iyo kuwa ay ilma adeerrada iyo ilma abtiga yihiin. Midda kale, dhawaanshaha ka sokow, waa in ay gabadhu karti leedahay, madaxtooyada taqaannaa, oo cadkeeda dhacsan kartaa, ninkeedana meel marin kartaa. Haddii ay tahay baarid buulkeed-ku-dumo ah, iska dhaaf, Caynabaa ka biyo dhaw e.
Waxaa qoray: Suldaan Nayruus
Kala xiriir: [email protected]
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Caasimada Online. Caasimada Online, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada [email protected] Mahadsanid